Sawiro:-Wasiir Xoosh Jibril oo bilaabay qorshihiisii dib u eegista dastuurka fadaraalka ee shakiga xooga leh laga qabay – Idil News
Sawiro:-Wasiir Xoosh Jibril oo bilaabay qorshihiisii dib u eegista dastuurka fadaraalka ee shakiga xooga leh laga qabay
Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Fadaraalka Somaliya,ayaa kulan wadatashi oo ka dhacay Xarunta Cilmibaarista ee Nabadda iyo Horumarinta Puntland u qabatay qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ee deegaanada Puntland.
Kulanka ayaa waxaa ka soo qaybgalay bulshada qaybaheeda kala duwan iyo masuuliyiin katirsan dawlad Puntland oo ay kamid ahaayeen Wasiirka Arrimaha Dastuurka ee Puntland iyo Gudoomiye Ku-Xigeenka Baarlamaanka Puntland.
Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil wasiirka wasaaradadastuurka fadaraalka oo kulanka khudbad ka jeediyay,ayaa sheegay in uu aad ugu farxasanyahay kulanka maanta.
“Aad ayaan ugu farxsanahay aniga iyo waftiga ila socday wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee dawladda Federaalka in aan maanta kulamadii wadatashiga ee hannaanka dib u eegista Dastuurka aan soo gaarsiino Puntland,anaga oo ku sii wajahan dhamaan Dawladaha xubnaha ka ah dawlada fadaraalka ah” ayuu yiri Wasiir Xoosh.
Isku soo wada duuboo baqdin iyo shaki xoog leh ayay bulshadu kamuujinaysaa wasiir Xoosh Jibril,iyadoo bulshada inteeda badan ay u aragto wasiir Xoosh in uu isagu khatar ku yahay dastuurka iskabadaa waxuu saxo ama si cadaalad ah ku fuliyee.
Xoosh waa nin musuqmaasuq badan,balwad leh aad loogu xanto laaluush qaadashada,isla markaana lasoo tijaabiyay.
Dawlada Puntland oo ahayd bud dhigayaashii dastuurka fadaraalka iyo guud ahaan nidaamka dawliga ah ee Somaliya,ayaa looga fadhiyaa ilaalinta dastuurka iyo in ay il gooniya oo taxadar leh kula socoto shaqada wasiir Xoosh.